TATI-BAOVAON’NY FIVORIANA TENY @67ha NY 22 MEY 2011 | TAMIFA Madagascar
« Un autre modèle de Statut S.A.R.L
Calendrier de formations par l’Association DEJA »
TATI-BAOVAON’NY FIVORIANA TENY @67ha NY 22 MEY 2011
Posted 25 mai 2011 by TAMIFA Communication in Vie Associative.	Laisser un commentaire
1)Vondrom-pikambanana mifampizara haitao sy mikarakara famatsiam-bola (Basketfound) ny VIF. Niarahan’ny mpivory niaiky fa sehatra iray ahazoana miantoka ny fanatanterahana ny tetik’asan’ny Fikambanana isanisany koa hirotsaka ho Mpikambana mavitrika amin’ny fananganana sy fitantanana azy ny TAMIFA Madagascar. Efa mandray anjara amin’ny fivoriana samihafa ho fanomanana rehetra ireo solontenantsika isaky ny Rantsana misy. Mifandrindra amin’izy ireo akaiky ny Foibe. Ankoatra ny toromarika izay nomena dia tapaka fa hisy fivoriana lehibe hoentina mandrefy ny asan’ireo solontena ireo amin’ny volana Jolay 2011 ary koa hankatoavana feno ny fiarahantsika miantsehatra amin’ity vondrona ity.
2)Rafitra iray eo ambany fiahian’ny Commission Envergure ny TAMIFA Communication izay nampahafantarana teto ny fijoroany. Ny fisahanana ny serasera hita mason’ny Fikambanana no anton- draharaha imasoany. Ny namantsika Lova RAZAFINJATO no mitarika azy ampian’ny Mpikambana vitsivitsy mifandrimbona aminy. Hatreto dia ny fiandraketana ny Version éléctronique sy ny tranokalam- pifandraisana no asa mivaingana efa mandeha. Tanjona ny fampielezana ny TAMIFA Madagascar araka izay tratra. Natao ihany koa ho fitaovana manara- penitra sy manaraka toetr’andro ary tsy ilaozan’ny teknolojia vaovao hifanakalozan’ny Mpikambana fahaiza-manao sy sedrofana .Hita ao anatin’ny tranonkalantsika ny mombamomba ankapobeny ny Fikambanana ,ireo Mpitarika sy Mpikambana miisa 50 mahery, tahirin- kevitra maro mahaliana… Amin’ny teny malagasy sy frantsay ny rakitra rehetra ary ezaka mitohy efa an- dalana ny handikana azy amin’ny teny vahiny hafa mba ahafahan’ny vazan- tany efatra mahatakatra tsara ny asa ilofosantsika amin’ny fampivelarana ny tontolon’ny tanora eo amin’ny fifeheza- mitarika sy fandrindram- pihariana. Tapaka nandritra ny fihaonana fa :
Hisy fifanampian’ny samy Mpikambana eo amin’ny fifehezana ny fampiasana ny tranonkala.
Ampatanjahana ny rafitra sy fiasan’ny TAMIFA Communication koa hisy hetsika manokana ho fanangonam- bola (Quête)avy amintsika hanosehana ny fampandehanan- draharahany.
3)Teo amin’ny fandaharam-potoana nitafana teboka malalaka dia nafana ny adihevitry ny Mpikambana ny amin’izay tetika hampahombiazana ny tsirairay sy ny Fikambanana .Nampangotraka izany rahateo ny firoboroboan’ny asa aman-draharaha efa misoritra mazava ankehitriny. Izay nisongadina kosa dia ny tokony hifotorana bebe kokoa amin’ny fifampizarana haitao sy fanofanana toy ireo mifandraika amin’ny fananganana sy fitantanana tetik’asa,fifehezana ny lalàna amin’ny fiatreham- pihariana sy fahazoam-bola, tetika fahaiza- mitarika omban’ireo fombafomba hampandrobona bebe kokoa ny TAMIFA Madagascar.
Ny nifametrahana dia ny amin’ny hampitomboana ny fihaonana isan- tokony ho an’ny Mpikambana ka samy haka ny tandrify azy ny isan’ambaratonga (Foibe, Mpitarika isam- boamiera sy Rantsana). Nampahafantarin’ny Mpandrindra Foibe izay nitarika ny fotoana moa ny fahafahantsika mampiasa ny trano eto 67 ha ary koa ny fisokafan’ny Biraom- pifandraisana fanampiny eny Mahatony Ivandry hanamora ny asantsika.
Fehiny : Tsy teny filamatra intsony ankehitriny fa dia ROSO ISIKA ! Samy nitsara izany avokoa ny mpivory tonga maro tamin’ity fihaonana manokana ity. Tefentsika rahateo hampahazo vahana ny fiainantsika andavanandro ny TAMIFA Madagascar koa porofointsika Mpikambana tsirairay hatrany amin’ny fampandrosoana ny ambaindain’ny Fikambanana izany. Mankasitraka mitafotafo an’ireo nandray anjara rehetra.
NY MPANDRINDRA FOIBE